CMdị ahịa ise ise CMO kwesịrị ime ihe na 2020
Tọzdee, Disemba 17, 2019 Tọzdee, Disemba 17, 2019 Jay Atcheson
Ihe mere ịga nke ọma ji dabere na atụmatụ aghụghọ. N'agbanyeghi mmefu ego ahia, ndi CMO ka na-enwe nchekwube banyere ikike ha nwere iru ihe ha choro na 2020 dika Gartner na-eme kwa afọ 2019-2020 CMO Spend Survey. Mana nchekwube n'emeghị ihe ọ bụla anaghị arụpụta ihe na ọtụtụ CMO nwere ike ghara ịhazi atụmatụ maka oge siri ike n'ihu. Ndị CMO na-eme ngwa ngwa ugbu a karịa ka ha dị n'oge ndalata akụ na ụba ikpeazụ, mana nke ahụ apụtaghị na ha nwere ike ịda mba iji gbaghaa ihe ịma aka
Ihe eji eme ihe banyere ihe omuma data (DMPs) biara na onwa ole na ole gara aga ma otutu mmadu hu ya dika onye nzoputa ahia. N'ebe a, ha na-ekwu, anyị nwere ike ịnwe "ndekọ ọla edo" maka ndị ahịa anyị. Na DMP, ndị na-ere ahịa na-ekwe nkwa na ị nwere ike ịnakọta ozi niile ịchọrọ maka nlele ogo 360 nke onye ahịa. Naanị nsogbu - ọ bụghị eziokwu. Gartner na-akọwa DMP dị ka sọftụwia nke na-etinye data sitere n'ọtụtụ isi
Gịnị bụ Ntanetị nke Ihe? Gịnị ka ọ pụtara maka ire ahịa?
Tuzdee, Machị 3, 2015 Fraịdee, Nọvemba 17, 2017 Douglas Karr
Njikọ Internetntanetị na-aghọ eziokwu maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ ọ bụla. Nke a ga - arụ nnukwu ọrụ na nnukwu data na azụmaahịa n'ọdịnihu anyị dị nso. Gartner ebuola amụma na site na 2020, a ga - enwe ihe karịrị ijeri ngwaọrụ 26 ejikọrọ na Internetntanetị. ] = [op0-9y6q1 Gịnị bụ Ntanetị nke Ihe Ihe na-ezo aka n'ihe ndị anyị na-anaghị echekarị dị ka ijikọ. Ihe nwere ike ịbụ ụlọ, akụrụngwa, ngwaọrụ, ụgbọala, ma ọ bụdị mmadụ. Ndị mmadụ
Monday, August 4, 2014 Monday, August 4, 2014 Dana Nwachukwu
Ndị mmekọ Channel na Value-Added Resellers (VARs) bụ nwa nkuchi na-acha uhie uhie (a na-emeso na-enweghị ihu ọma nke ọmụmụ) mgbe a bịara n'ị nweta nlebara anya na akụrụngwa sitere n'aka ndị nrụpụta nke ọtụtụ ngwaahịa ha na-ere. Ha bụ ndị ikpeazụ inweta ọzụzụ na nke izizi ịza ajụjụ maka ị nweta ego ha. Na mmachi ahịa Amawaputala, na ihe mgbe ochie ahịa ngwá ọrụ, ha na-adọga n'ụzọ dị irè-ekwurịta okwu mere na ngwaahịa ndị pụrụ iche na dị iche iche. Gịnị bụ ọwa ahịa? Usoro
Gartner Amụma nke Top 10 Teknụzụ maka 2011
Tọzdee, Disemba 9, 2010 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịkọ amụma Gartner nke teknụzụ 10 kacha elu maka 2011… yana etu amụma niile si emetụta ahịa dijitalụ. Ọbụna ọganihu na nchekwa na ngwaike na-emetụta ikike nke ụlọ ọrụ iji soro ndị ahịa kerịta ma ọ bụ kesaa ozi na atụmanya ngwa ngwa na ịrụ ọrụ nke ọma. Top Ten Technologies maka 2011 Cloud Computing - Cloud Mgbakọ na kọmputa ọrụ adị tinyere a ụdịdị dị iche iche site na-emeghe ọha na eze na-emechi nzuzo. Afọ atọ sochirinụ ga-ahụ nnyefe ahụ